Isitudiyo esilungele iSikhululo seenqwelomoya saseStansted- silala 4.
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguRoddy
Isitudiyo esibanzi esinendawo yokuhlala ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezi-4.
Ibhedi enye ephindwe kabini kunye nebhedi enye, kunye negumbi lokuhlambela eline-ensuite.
Indawo yesidlo sakusasa kunye netafile kunye nezitulo.
Ilinen yebhedi ekumgangatho ophezulu kunye neetawuli.
Ilungele isikhululo seenqwelomoya saseStansted-i-2.5 yeemayile kude, i-10 imizuzu yokuhamba ngeteksi kude. Indawo yokuhlala yahlukile kwindlu yethu kwaye inomnyango wayo wamaqhosha okhuselweyo ukuze ukwazi ukuza kwaye uhambe ngokuthanda kwakho.
I-Microwave, i-toaster, iketile. Isikhenkcezisi sinezinto eziyimfuneko kwisidlo sakusasa.
Indawo yokupaka yasimahla yendlela yokuhlala.
Sinestudiyo esiziqulathileyo esinebhedi enye ephindwe kabini kunye neebhedi ezimbini zebhanti, kunye negumbi lokuhlambela le-en-suite. Kukho isofa, itafile kunye nezitulo, kunye nezixhobo ezisisiseko zokutya.
Sibonelela ngesidlo sakusasa esisisiseko - iti, ikofu, i-cereal, ubisi, isonka, iziqhamo, i-spreads. Kukho i-toaster kunye ne-microwave.
Isakhiwo sahlukile kwindlu kwaye kukho isitshixo samaqhosha emnyango - xa ubhukisha uya kunikwa ikhowudi ukuze uhambe kwaye uhambe njengoko uthanda. Ungafika nangaliphi na ixesha - akukho mfuneko yokuba ungene. Uninzi londwendwe lwethu lufika luvela kade kwiinqwelomoya kwaye luzivumele lungene ngazo zonke iiyure.
IBroxted yilali encinci kumgama oziikhilomitha ezimbalwa ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya iStansted. Yindawo yasezilalini yokulima. Kukho intabalala yokuhamba kakuhle ukusuka endlwini, kwaye sisondele kwindlela yelizwe lomjikelo. Kodwa nceda uqaphele ukuba akukho venkile okanye iindawo zokutyela ngaphandle kwe-pub. Iivenkile ezikufutshane kunye neendawo zokutyela zikwisikhululo seenqwelomoya.
URoddy ngumkhweli webhayisikile ozimiseleyo, kwaye sinokubonelela ngokugcinwa komjikelo okhuselekileyo kwigaraji yethu ukuba kuyimfuneko.
Umbuki zindwendwe ngu- Roddy
Professional married man with four children. Likes cycling, making things, aircraft, dogs, family
Siyintsapho esebenzayo, omnye wabantwana bethu abane usahlala ekhaya. Ke sinokubakho kwaye siyakuvuyela ukunceda kunye nokucebisa, kodwa asinakuqinisekisa ukubakho ngamaxesha onke.
Nceda uqaphele ukuba sinenja - iLabrador emnyama, iikati ezi-2 kunye neenkukhu ezi-3. Inja ngamanye amaxesha inokukhonkotha xa kufika abantu abangabaziyo, kodwa yona ayinabungozi!
Siyintsapho esebenzayo, omnye wabantwana bethu abane usahlala ekhaya. Ke sinokubakho kwaye siyakuvuyela ukunceda kunye nokucebisa, kodwa asinakuqinisekisa ukubakho ngamaxesha onke…